Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Amachibidoro mmachi na Bangkok ka ọnụọgụ COVID dara 30%
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ndị na-eri ihe agaghị achọ ịgba ọgwụ mgbochi yana/ma ọ bụ gafee ule COVID-19 iji rie nri n'ụlọ nri na ụlọ nri na mpaghara gbara ọchịchịrị.
Bangkok na-eme ka mgbochi COVID-19 belata ka ọnụọgụ ọrịa ọhụrụ na-agbada.
Ndị na -elekọta ụlọ oriri na ọ noụ noụ adịkwaghị mkpa ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke iji rie nri.
Oge mgbede 9pm-4am ga-adịgide ebe ọ bụla.
Site na ọrịa ọhụrụ na-ada 30% n'ime izu abụọ gara aga, Minista Ahụike Ọha na ndị ọzọ metụtara nwere onye Prime Minister Thai Prauth Chan-ocha rịọrọ ka ha wepụta usoro iji chọpụta mmetụta usoro ndị ahụ dị mfe nwere na ọnụọgụ ọrịa.
Ugbu a, ndị na-eri ihe agaghị achọ ịgba ọgwụ mgbochi yana/ma ọ bụ gafee ule COVID-19 iji rie nri n'ụlọ nri na ụlọ nri na mpaghara gbara ọchịchịrị, dị ka ọkwa ọhụrụ na Royal Gazette nke Thailand, Bangkok Post kọrọ.
Nkwupụta ahụ megidere akụkọ mbụ nke kwuru na ụlọ oriri na ọ wishụ wishụ na-achọ ịmalitegharị ga-achọ ka amachibido ndị na-eri ọgwụ na/ma ọ bụ ndị gafere ule COVID-19 na ngwa nnwale antigen tupu ha abanye.
Tinyere mgbatị mgbochi mgbochi COVID-19 ndị ọzọ nke Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) kwadoro, ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ọtụtụ azụmaahịa ndị ọzọ na-akwado imepe, agbanyeghị na mgbede ga-adị n'elekere itoolu nke ụtụtụ ruo anọ ga-adịgide, ebe ihe niile A na -agwa ndị ọrụ ka ha rụọ ọrụ site n'ụlọ ruo Septemba 9.
A ga-anabatakwa nnọkọ ọha nke ihe karịrị mmadụ 25 na mpaghara gbara ọchịchịrị, n'agbanyeghị ikike ndị ọchịchị.
In Bangkok, a ga-ahapụ ụlọ akwụkwọ ịmaliteghachi nkuzi nkeonwe, ebe ọ bụ na ha mezuru ọnọdụ ndị Ministry of Education na Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation setịpụrụ.
Malite taa ụlọ ebe a na-achọ mma na ụlọ ahịa na-akpụ isi ga-emepekwa ọzọ, n'agbanyeghị na agaghị ekwe ka ndị mmadụ banye. Spas na ụlọ ịhịa aka n'ahụ, ka ọ dị ugbu a, nwere ike ịnye ịhịa aka n'ụkwụ.
Ọzọkwa, agakwaghị egbochi njem ime obodo site na mpaghara gbara ọchịchịrị. A ga -ahapụkwa ụgbọ elu ịmaliteghachi ọrụ ndị njem, ọ bụrụhaala na oche nwere ikike 75%, Dr Taweesilp kwuru.
Iche iche, na Ụlọ ọrụ nchekwa ahụike mba (NHSO) kpọrọ ndị ọrụ ngalaba ile ọbịa ka ha nwalee nnwale COVID-19 n'etiti August 31 na Septemba 3 na nnukwu ụlọ ọrụ gọọmentị na Bangkok nke nwere ike ịhazi mmadụ 1,500 kwa ụbọchị.